काभ्रेका दुई ठूला अस्पतालमा छैन बेड खाली ! – मिलिजुली खबर
काभ्रेका दुई ठूला अस्पतालमा छैन बेड खाली !
२२ बैशाख, धुलिखेल: काभ्रेका दुई ठूला अस्पतालले बेड भरिएको बताएका छन् । धुलिखेल अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएको कुनै पनि वेड खाली नरहेको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर रोशन महतोले जानकारी दिनुभयो ।
धुलिखेल अस्पतालले आईसियू, एचडियू, अक्सिजन सहितको र सामान्य गरी १ सय वटा बेड कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएको छ । ती कुनै पनि बेड खाली नरहेको डाक्टर महतोले बताउनुभयो ।
धुलिखेल अस्पतालमा आईसियू र एचडियू बेड जम्मा २५ वटा मात्रै छ । यी बेड पनि खाली छैनन् ।
नयाँ बिरामीले बेड पाउन कि त भर्ना भएको बिरामी निको हुनु पर्यो कि त मृत्यु नै कुर्नु पर्ने हो ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी एंव जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी) काभ्रेका संयोजक शिवराम पोख्रेल त्यो अवस्था नआओस् भनेर जिल्लाका दुबै अस्पताललाई व्यवस्थापनमा कुनै कमि हुन नदिन निर्देशन दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार धुलिखेल अस्पतालसँग १ सय बेडको कोरोना संक्रमित राख्ने गरी सम्झौता भईरहेको छ ।
(डिसीसीएमसी) का संयोजक पोख्रेलको कुरा सुन्दा केहि आशा अझै बाँकी छ नयाँ बिरामीको । तर धुलिखेल अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर रोशन महतोको कुराले निराश बनाउँछ । डाक्टर महतो अस्पतालले छुट्याएको सबै बेड भरिएको बताउनु हुन्छ । तर प्रजिअ पोख्रेलले १ सय बेड पुरै सञ्चालन नआईसकेकाले केहि समस्या आएको बताउनुभयो । ‘मैले अस्पताल ब्यवस्थापनसँग कुराकानी गरेर अहिले तत्काल एचडियू बेड सञ्चालन गर्न नसकेपनि अक्सिजन जडित सामान्य बेड मात्रै भएपनि चलाउने भनेको छु, प्रजिअ पोख्रेलले भन्नुभयो ‘आजैदेखि उहाँहरूले काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’
शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपाले जम्मा २० बेड कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याएको छ । यो अस्पतालमा कोभिड आइसियू र एचडियू वेड एउटा पनि छैन् । शिरका कोभिड फोकल पर्सन पुकार श्रेष्ठका अनुसार अक्सिजन सहितको २० बेड कोरोना संक्रमितको लागि छ । यसमा गम्भीर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सकिँदैन । सामान्य अक्सिजनले हुने संक्रमित मात्रै राख्न सकिन्छ ।
धुलिखेल अस्पताल र शिर मेमोरियल अस्पतालले काभ्रेका मात्रै होईन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर सहित तराईका जिल्लाका बिरामी समेत धान्नु पर्ने अवस्था छ । तर अस्पतालहरूको तयारी भने खास भर पर्दो छैन् । जिल्लामा तिब्र गतिमा कोरोना भाईरसको दोस्रो लहर फैलिएरहेको छ ।
सापिङको उर्लेनीमा सामूहिक बेसार खेती सुरू
लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले डाँडापाखारमा सुरू गर्यो अक्सिजन सहितको आईसोलेसन